प्रेम–यौनको राजनीति- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पुस ५, २०७६ धनकुमारी सुनार
सन् १९०३ मा फ्रान्समा जन्मेकी सिमोन डी बोउवार प्रेम, यौन र महिला मुक्तिबारे विगुल फुक्ने लेखक हुन्  । महिला उत्पीडनको चिरफार गरेकी सिमोनलाई विवाह–संस्थामा विश्वास थिएन  ।
अविवाहित रहे पनि उनी अस्तित्ववादका प्रवर्तक ज्याँ पाल सार्त्रसँग प्रेम र यौन–सम्बन्धमा रहिन् । सार्त्र र सिमोनको जीवनमा पटक–पटक तेस्रो व्यक्ति आए पनि उनीहरूबीच माया र विश्वास कायम रह्यो ।
अर्की ऐतिहासिक व्यक्तित्व रोजा लक्जमबर्ग हुन्, जो पोल्यान्डमा सन् १८७१ मा जन्मिएकी मार्क्सवादी अभियन्ता हुन् । उनी पहिले पार्टी नेता लियो जोगिचेवसँग प्रेम–सम्बन्धमा थिइन्, पछि आत्मीय मित्र क्लारा जेटकिनका छोरा तथा अर्थशास्त्री एवं अभियन्ता कोत्सा जेट्किनसँगको रिलेसनमा थिइन् । उनको तर्क थियो, के प्रेम–सम्बन्ध वैवाहिक संस्थामा प्रवेश गर्न आवश्यक छ ? कानुनी सर्तमा बाँधिएर वैवाहिक जीवन जिउनु महिला पुरुषको नियति हो ?
यी युगान्तकारी महिलाले पितृसत्ताले बनाएका प्रेम, यौन, विवाह र परिवारसम्बन्धी कानुन र परम्परालाई चुनौती दिए । साहित्यकार पारिजातले पनि विवाह नगरी आफू प्रेम र यौन–सम्बन्धमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै चुनौती दिएकी थिइन् ।
पाखण्डी समाज र विषकन्या
नेपाली समाजमा प्रेम र यौन–सम्बन्धलाई ‘ट्याबु’ (निषेधित विषय) बनाइएको छ । त्यसैले पुरुषको यौन–कुण्ठा ६ महिने बालिकादेखि ९० वर्षको वृद्घाको बलात्कार र हत्यामा पोखिएको छ । महिला शरीर सहकर्मी, आफन्त, प्रेमी वा श्रीमान्को मोलमोलाई, हस्तक्षेप र आक्रमणको केन्द्र बन्दै आएको छ । यस्ता घटनाले महिला शरीरमाथि पितृसत्ताको राजनीतिलाई घाम जत्तिकै छर्लंग पारेका छन् ।
केही वर्षयता नेपाली समाजमा प्रेम, यौन–सम्बन्ध र यौनहिंसाबारे छलफल सुरु भएको छ । यौनहिंसाविरुद्घ महिलाहरू आँटसहित बोल्न थालेकाले प्रेम र यौन–सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे बहस हुन थालेको छ । महरा काण्डले पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
लेखक नरेन्द्रजंग पिटरले महरा काण्डपछि रोशनीलाई विषकन्याको उपमा दिए । विषकन्या बलियो शत्रुलाई मार्न वा शक्तिहीन गर्न प्रयोग गरिने महिलालाई जनाइन्छ । मन्दविष ख्वाएर बालिकाहरूको शरीरलाई विषालु बनाउने र शक्तिशाली पुरुष–शत्रुलाई प्रेमपासोमा पारेर मार्ने प्राचीन चलनतिर उनको संकेत होला । उनको बुझाइमा विषकन्याको सिकार भएका कृष्णबहादुर महरा अत्यन्त भलाद्मी थिए, सुरापानबाट टाढै रहने वैचारिक व्यक्तित्व थिए ।
महरा काण्ड हठात् घटित भएको घटना होइन, न त रोशनीलाई कसैले प्रयोग गरेको हो । हुन कसै–कसैले त सीआईएको संलग्नतासम्म भन्न भ्याए । हाम्रो दुःख नै के हो भने हामी मान्छेलाई मान्छे हुन दिँदैनौं । उसलाई अलौकिक वा देवताको स्तरमा राखेर हेर्छौं । खानु, सुत्नुजस्तै प्रेम र यौन–सम्बन्ध पनि मान्छेका जैविक आवश्यकता हुन् भन्नेसमेत बिर्सन्छौँ ।
महरा र रोशनीबीच प्रेम सम्बन्ध, लेनदेन वा अरू केही थियो । यो उनीहरूबाहेक अरूका लागि अनुमानको विषयमात्र हो । तीन दशकको सम्बन्ध प्रेम नै थियो भने दुःखान्त भएको छ । यही मेसोमा विवाह–संस्थाभन्दा बाहिरका प्रेम र यौन–सम्बन्धबारे बहस जारी छ । उनीहरूको प्रेम र यौन–सम्बन्धले जन्माएका प्रश्नबाट छलफल सुरु गर्न सकिन्छ ।
प्रश्न एक : महरासँग उच्च राजनीतिक हैसियत नभएको भए, दुवैबीच प्रेम भएको भए, दुवैले आफ्ना पुराना सम्बन्ध–विच्छेद गर्न र कुनै पनि उमेरमा दोस्रो विवाह गर्न पाउने सहज वातावरण भएको भए के हुन्थ्यो ? उनीहरूले पुराना सम्बन्धविच्छेद गरी दोस्रो बिहे गरी सुखद जीवनको विकल्प रोज्न पनि सक्थे । यो खालको दुर्घटना दुवैको जीवनमा आउने थिएन र दुवैका परिवारजनले मानसिक पीडा खेप्नुपर्ने थिएन । समाजमा यस्ता धेरै विवाहित छन्, जसले आपसमा प्रेम–सम्बन्ध नहुँदानहुँदै पनि मक्किसकेको वैवाहिक संस्थालाई जोगाउनुपर्ने सार्वजनिक बाध्यता झेलिरहेका छन् ।
प्रश्न दुई : प्रेम, विवाह र यौनबारे धेरैजसोको धारणा पुँजीवादी भइसक्ने वा नयाँ आयाम खोजी गर्ने । तर, मानसिकता, संस्कार र बुझाइ भने सामन्तवादमै टाँस्सिइरहेको छ । अब प्रेम र यौन–सम्बन्धबारे पुराना डिस्कोर्सको खुलेर विश्लेषण गर्दै समाजलाई सही ट्र्याकमा लैजान परिवर्तकारी पुस्ताले भूमिका खेल्न जरुरी छ । महिलापात्र मात्रै सिद्दिने र पुरुषपात्र निर्णायक, वीर र ठालु भइरहेने हो भने हाम्रा प्रेम र यौन–सम्बन्ध भत्किन्छन् नै, भत्किन दिनुपर्छ । पुरानो समाप्त नभई नयाँ सिर्जना हुँदैन ।
प्रेम र यौनमा देखिएको संक्रमण
मानव समाजको सुरुआतमा न एकनिष्ठ विवाह थियो, न यौन–सम्बन्ध नै । नैतिक/अनैतिक जे भए पनि, प्रेम वा सहमतिमा परिपक्व महिला र पुरुषबीच हुने एकनिष्ठ वा बहुनिष्ठ यौन–सम्बन्ध प्रचलित यथार्थ हो । यौन र प्रेमको मामलामा धेरै थोरै मान्छे मात्र एकनिष्ठ हुन सक्छन् । को–कोबीच कति यौन–सम्बन्ध वा प्रेम भयो भनेर तेस्रो व्यक्ति गोठालो लागेर साध्य हुँदैन । त्यसमा दुई कर्ता नै सजाय र पुरस्कारका लागि जिम्मेवार हुने हो ।
प्रेम, यौन र विवाह संस्थासम्बन्धी बुझाइ र अपेक्षा बदलिँदो छ । तर, समाजका ठेक्का लिएका राजनीतिक र सामाजिक मठाधीशका बुझाइ, व्यवहार भने जडसूत्रवादी छ । अब यौन र प्रेममा बहुनिष्ठतालाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने होइन । जसरी प्रेम र यौनमा महिला–पुरुषको समान भागीदारी चाहिन्छ, त्यसरी नै महिला र पुरुषबीच समान मर्यादा र विश्वास जोडिनुपर्छ ।
विवाहअघि–पछि परिपक्व महिला र पुरुषबीच सहमतिमा हुने मानसिक वा शारीरिक सम्बन्धलाई समाजपिच्छे फरक ढंगले हेरिन्छ–बुझिन्छ । के नैतिक, के अनैतिक, समाज र त्यसको अवस्थाअनुसार भिन्नता छ । आज विवाहपूर्व र विवाह–इतर शारीरिक सम्बन्ध सामान्यजस्तै हुन थालेको छ । समाज जति खुला हुँदै छ, यौनबारे बुझाइ र गराइ पनि खुकुलिँदै छ ।
नेपाली पितृसत्तात्मक समाज महिलाको यौनिकतामाथि नियन्त्रणमा टिकेको छ । त्यसैले महिलालाई यौनबारे छलफल गर्न, यौनानन्दका गतिविधिबारे जानकारी लिनसमेत विमुख पारिएको छ । सबै क्षेत्रमा पुरुष आधिपत्य रहेकाले महिला शरीरमाथि पनि जे गरे हुन्छ भन्ने मानक स्थापित छ ।
बदलिँदो प्रेम र यौनको भाष्य
भनिन्छ, प्रेममा जात, वर्ग र देशको सीमाले अर्थ राख्दैन, न त विवाह हुनु नहुनुले नै माने राख्छ । यौन–सम्बन्धलाई एकनिष्ठ बनाउँदै प्रेमपछि विवाह अनि यौन–सम्बन्धको मान्यतामा बाँध्नु राम्रो हुन सक्ला । तर, नेपाली समाजमा पनि थुप्रै युवा–जोडी विवाह नगरी रिलेसनमा बस्न थालेका छन् । महिलाहरूले सगर्व भन्न थालेका छन्, ‘म रिलेसनमा छु, म विवाहमा विश्वास गर्दिनँ ।’ यो प्रेम र यौनबारे सडेगलेका मान्यताप्रति नयाँ पुस्ताको विद्रोह पनि हो । यो विद्रोहलाई नकार्न सकिँदैन, बरु यसलाई कसरी स्वस्थ र मर्यादित बनाउने भन्ने सवाल प्रधान हो । पुरुषहरूले खुला रूपमा विद्रोह गरेको कमै पाइन्छ । पुरुष मनोविज्ञान अझै आँटिलो देखिएको छैन । समाजका पुरानै मूल्य–मान्यतामै ऊ खुसी छ, किनकि ऊ प्रेम र यौनमा आफू एकनिष्ठ हुन चाहँदैन तर महिलालाई भने एकनिष्ठ बनाउन खोज्छ ।
युवा पुस्ता, अझ महिलामा विवाह संस्थाप्रति विश्वास गुम्दै छ । यसमा पढेलेखेका र कामकाजी महिलाको बाहुल्य छ । यसको अर्थ उनीहरू विवाह संस्था र परिवारबाट विमुख हुँदै छन् । यसले देखाउँछ, पुरानो समाज र परिवारसम्बन्धी युटोपिया भत्किँदै छ । समाजका अरू पक्ष फेरिँदै छ भने प्रेम, यौन, विवाह, परिवार सामन्ती र पितृसत्तात्मक रहन सक्छन् त ? परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका नाउँमा महिलामाथि थोपरिएका बन्देजका आधारमा समाज सभ्य र परिवार आदर्श बनिरहन सम्भव छ ? अवश्य छैन ।
मुक्तिको सामूहिक चेष्टा
हाम्रो समाज प्रेम र यौनको मामिलामा लुकेर जे पनि गर्ने, तर खुलेर गर्दा स्वीकार्य नहुने ढोंगी छ । यसले थुप्रै असन्तुष्ट जोडीलाई निरस र प्रेमविहीन वैवाहिक जीवन बिताउन बाध्य पारिरहेको छ । त्यसैले धेरैको प्रेम र विवाहको दुःखद अन्त्य भइरहेको छ ।
साहित्यकार आहुति प्रेम र यौन पनि राज्यसत्ताको चरित्रअनुरूप निर्माण हुने बताउँछन् । नेपाली समाज प्रेमको मामिलामा संघर्ष गर्दै छ, किनभने प्रेममा अझै जात, वर्ग र धर्म प्रधान छ । प्रेम जीवनको बाधक र वर्जित चीज होइन, सहयोगी बन्नुपर्छ । प्रेम र यौनलाई लिपपोत गरेर छोप्ने हैन, बाहिर निकाल्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित, सुसंगत र सुसंस्कृत बनाउने चुनौती छ ।
पुँजीवादमा पद र पैसाले सबै कुरा किन्न सकिन्छ, त्यसमा पनि महिलाको किनबेच र उनीहरूमाथिको हिंसा अत्यधिक छ । निःसन्देह, कुनै पनि सम्बन्धमा, प्रेम र यौनमा प्रेमी, श्रीमान् वा अर्को कुनै व्यक्तिबाट हुने हिंसा स्वीकार हुन सक्दैन । अतः सिमोन दी बोउर भन्छिन्, ‘यदि पुरुषले काम–क्रीडालाई एक युद्घ–क्षेत्र र बिस्तरालाई अखडा मान्न बन्द गर्छ भने स्त्रीका कैयौँ समस्या सहजै दूर हुनेछन् ।’
वर्तमानमा प्रेम र यौन–सम्बन्धलाई जटिल र ट्याबु बनाउनेभन्दा यसबारे सही ज्ञान र व्यवस्थापनको खाँचो देखिन्छ । प्रेममा त विश्वास, त्याग र समर्पण मात्र हुनुपर्छ । प्रेममा छलकपट, हिंसा र तिरस्कारको ठाउँ नै हुनु हुँदैन । तर, प्रेमका नाउँमा गरिने ढोङमा चाहिँ शरीर र सत्ताको लेनदेन हुनसक्छ । प्रेम र हिंसा दुई विपरीत भिन्न छन्, आकाश र जमिनजत्तिकै । जहाँ दुई महिला र पुरुषबीच प्रेम र आदर हुन्छ, त्यहाँ निमेष पनि दबाब र हिंसाको कल्पना गर्न सकिँदैन, न त प्रेममा माइनस–प्लसको फर्मुला नै लागू हुन्छ । हुन्छ त त्याग, समर्पण र प्रेम अनि प्रेम नै हुन्छ, जसले परिवार र समाजलाई समेत अग्रगतिमा लैजान्छ ।
(नेपाल महिला आयोगकी पूर्वआयुक्त सुनार हाल मानवशास्त्रमा पीएचडी गर्दै छिन्) प्रकाशित : पुस ५, २०७६ ११:२३
कवि सुन्दर कुरूपको काव्यिक आधारभूमि उनले बाँचिरहेको समय र परिवेश हो । ‘पृथ्वीको आविष्कार’ का अधिकांश कविता गाउँका छन्, जो अर्गानिक छन्, रैथाने स्वादका छन् ।
पुस ५, २०७६ प्रकाश थाम्सुहाङ
इलामको दक्षिणी भेग र दमकको माथितिर अवस्थित छ— चुलाचुली गाउँ  । गाउँको शिरमा ध्यानस्थ योगीझैँ लाग्ने स–साना पहाड छन्  । तल्तिर छ, समथर मैदान । गाउँको धमनीझैँ लाग्ने खहरेहरू त्यही मैदान भएर बग्छन्, जहाँ पानी कम गाउँलेको पसिना ज्यादा बग्छ । सम्भवतः त्यही पसिनाले चुलाचुलीको सभ्यता निर्माण भएको हुनुपर्छ ।
भनिन्छ— प्रकृतिले संस्कृति निर्माण गर्छ । त्यसकारण प्रकृतिअनुसार, यहाँको संस्कृति निर्माण भएको छ । त्यो जीवन्त लाग्छ । यही जीवन्त संस्कृतिमा रम्दै चुपचाप साधनारत एउटा कवि छन्, जो हल्लाभन्दा पर सिर्जनात्मक बाँचिरहेछन् । ती कवि हुन्— सुन्दर कुरूप । हालै उनको कवितासङ्ग्रह प्रकाशित छ– पृथ्वीको आविष्कार ।
कुनै पनि कविलाई रचना प्रक्रियाका लागि एउटा निश्चित आधारभूमि भयो भने उम्दा सिर्जना आविष्कार हुने सम्भावना प्रबल हुँदोरहेछ । त्यो आधारभूमि कविले बाँचिरहेको समय र परिवेश पनि हुन सक्दो रहेछ । मात्र त्यहाँ कविको तिख्खर चेत, चिन्तन, कल्पनाशीलता र अभिव्यक्ति कौशल चाहिँदोरहेछ । कवि सुन्दर कुरूपको काव्यिक आधारभूमि उनले बाँचिरहेको समय र परिवेश हो । तर्सथ, पृथ्वीको आविष्कारभित्रका अधिकांश कविताहरू गाउँका कविता छन् । जो अर्गानिक छन् । रैथाने स्वादका छन् ।
गाउँसँग आख्यानको पेन्डोरा हुन्छ । गाउँको सन्दुकहरूमा, गोरेटोहरूमा, धानको सुगन्ध बोकेर बहने बतासहरूमा कथा हुन्छ । ती कथाहरू कवितामा कलात्मक आयो भने ओजपूर्ण सुनिदो रहेछ । कवि सुन्दर कुरूपको काव्यिक प्रवृत्ति कवितामा आख्यान आउनु हो । नेपाली कविताको इतिहासमा पनि आख्यान कहने कलात्मक कविताहरू नै मानक र लोकप्रिय भएका छन् । कवितामा प्रयुक्त कथाहरू पाठकलाई आफ्नैजस्तो लाग्यो भने कविताको सार्थकता त्यहाँ भेटिँदो रहेछ । फेरि आफ्नै भाषा निर्माण गर्न सफल कवि नै अब्बल दृष्टिगोचर हुँदोरहेछ । कवि भीडमा पनि निजत्वसहित उभिन सक्दोरहेछ ।
सौन्दर्यचेत कविलाई विशिष्टीकरण गर्ने अर्को अस्त्र रहेछ । यहाँ मननयोग्य कुरा के छ भने सौन्दर्यचेतलाई विचारले निर्देश गरिरहेको हुन्छ । कविको विचार सामाजिक न्यायको बर्खिलापमा छ भने सौन्दर्यचेत कुरूप देखिने सम्भावना सदैव रहन्छ । तसर्थ, कविताको टुलमा सौन्दर्यचेत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो लाग्छ । हामी नेपाली कविताको सौन्दर्यशास्त्र निर्माणकै क्रममा छौँ । यहाँ कवि सुन्दर कुरूपको सौन्दर्यचेतलाई केहीथरी आलोचकले साम्प्रदायिक बिल्ला भिराइदिने जोखिम उत्तिकै छ । किनभने उनका कविताले तमाम विभेदविरुद्घ आवाज मुखरित गरेको छ । कविता लेख्नु आफैंमा राजनीति हो भने सुन्दरले शालीन राजनीति गरेका छन् । यो राजनीति भुइँमान्छेको लागि हो, जो गाउँमा बस्छन् र उनीहरूको आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैन । यो राजनीति लालमाया धिमालहरूका लागि हो, जो जीविकाका लागि गिट्टी कुट्छन् र शासकीय घामको न्यानोबाट सदैव वञ्चित छन् ।
जम्मा ३७ थान कविताको सङ्ग्रह हो— पृथ्वीको आविष्कार । यी कविता विविध विषयमाथि बोल्छन् । प्रेम, मानवीय संवेदना, पहिचान, श्रमजीवीको चूडान्त कथा, विभेदकारी सत्ताविरुद्घ शालीन विद्रोह यी कविताका कन्टेन्ट हुन् । शीर्ष कविता ‘पृथ्वीको आविष्कार’ भूतपूर्व प्रेमिकाको लागि कविले आविष्कार गरेको सुन्दर प्रेमोपहार हो । जहाँ कवि मन बोल्छ— माफ पाऊँ है सोल्टिनी !
म त हजुरको याद सिरानी लगाएर यसरी निदाएछु कि बिउँझिँदा निकै बूढो भइसकेको थिएँ ।
यसो गम्छु— उताको पाब्लो नेरुदादेखि यताका सुन्दर कुरूपसम्म आइपुग्दा यो पृथ्वीमा लाखौँ प्रेम कविता लेखियो होला । तर, पनि प्रेम कविताले पाठकलाई दिक्क किन नलागेको होला ? कविलाई पनि प्रेममाथि नलेखौँ किन नलागेको होला ? अब त पुग्योजस्तो किन नलागेको होला ? यसको जवाफ निजत्वमा पाउँछु । अभिव्यक्तिकलाको पृथक्पनमा पाउँछु । प्रेमानुभूतिको वेगलपनमा पाउँछु । सम्भवतः यसैकारण शिल्प पुगेका प्रत्येक प्रेमकविताहरू पढ्दा पाठकले नौलो अनुभूति गर्छन् । संग्रहमा अर्को उम्दा प्रेम कविता छ— सोल्टिनी साइँली । यो कविताले किशोरवयको प्रेमलाई उजागर गरेको छ ।
यो कविता सांस्कृतिक अन्तरघुलनको पक्षमा पनि छ । कवि सुन्दर कुरूपको प्रेम कविता बलशाली हुनुमा उनले प्रयोग गरेको भर्जिन विम्ब हो लाग्छ । नयाँ विम्ब आविष्कार गर्न पनि कला चाहिन्छ । यो मानेमा कवि सुन्दर कुरूप सार्थक देखिन्छन् । नत्र हामीकहाँ प्रेम कविता लेख्न जोखिम मोल्नुपर्छ । नेपालमा यस्ता केही लभजिहादीहरू छन् कि उनीहरूलाई लाग्छ, प्रेम कविताले अन्ततोगत्वा शाषकको पक्षपोषण गर्छ । प्रेमले मुख्य मुद्दाबाट भड्काएर मानिसलाई निकम्मा बनाउँछ भन्ने उनीहरूमा सोच छ । तर, ‘जनयुद्घ’ मा हेरौँ त ? कसरी छापामारहरूले नारायणगोपालको प्रेमगीत सुन्दै हिँडे ! प्रेमको मनोवैज्ञानिक सत्यलाई अनदेखा गर्न अब मिल्दैन । तर, यति हो प्रेम कवितामा अभिव्यक्तिकला र दृष्टिकोण पृथक् भएर चाहिँ आउनुपर्‍यो ।
‘पृथ्वीको आविष्कार’ मा शब्दको महाजाल छैन । कविता छोटा तर बुलन्द छन् । कविको भाषा पाठकमा प्रसार हुन खासै जद्दोजेहाद पर्दैन । कवि सुन्दर कुरूपमाथि अर्का कवि स्वप्निल स्मृतिको टिप्पणी यहाँ उल्लेख योग्य छ । उनी भन्छन्, ‘सत्ताइतर रैथाने विम्ब, सांस्कृतिक प्रतीक र मिथ अनि आफ्नै घुर्यानको भाषा टिपेर विराट विश्वदृष्टिकोणसहित कवितालाई कलात्मक उचाइ दिने कवि हुन् सुन्दर कुरूप ।’
गाउँ जो सहरनजिक छ, अहिले संक्रमणमा छ । यहाँका मानिस प्रकृति र प्रविधिको विचित्र दुनियाँमा निमग्न छन् । भूमण्डलीकरण र सांस्कृतिक उपनिवेशवाद सडकमार्ग हुँदै गाउँमा छिर्ने क्रममा छ । खाजामा चाउचाउ संस्कृति भित्रिएको एक जुग बितिसक्यो ।
मानिसको हातहातमा मोबाइल छ । मोबाइल के छ, पूरै विश्व हातमा छ । यस्तो संक्रमणकालीन समयमा कविले रैथानेपनमा झुकाव राख्नु महत्त्वको विषय हो । पृथ्वीको आविष्कार प्रचलित महान मिथक राखेर कवितालाई भव्यता दिन खोज्ने कविहरूको लागि पनि नमुना बनेको छ । कविता खोज्न उनी टाढा गएनन् । विश्वका दर्शन पल्टाएनन् । आफ्नै पेरिफेरिकै बोजु, आमा, बुबा, जिग्री लुङ्गा आदि माथि कविता खोजे । संग्रहमा एउटा कविता छ— आमा र आमाका साथीहरू । छोटो तर सम्पूर्ण कविता हो यो । विम्बको सटीक प्रयोग र भावपक्षको गहिराइले यो कविता पठनीय बनेको छ । हाम्रा आमाहरूको जीवनमा दुःखको निरन्तरता छ, कविताले व्यक्त गरेको चोटिलो विचार हो यो ।
कला कलाका लागि कि विचारका लागि माथि बहस हुन थालेको पनि सत्तेजुग बितिसक्यो । तर हाम्रोजस्तो विभेदको फेहरिस्त लामै भएको समाजमा कला कलाका लागि भन्ने विचार अनुपयुक्त हुँदोरहेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने कला हाम्रो आवश्यकता हो लाग्छ । पृथ्वीको आविष्कारभित्र पनि कविले सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्दै कविताहरू लेखेका छन् । जस्तो एउटा कविता छ— नाच । नेपाली राजनीतिले कसरी भुइँमान्छेलाई कठपुतली बनाइरहेछ यो कविताले इंगित गरेको छ ।
अनेकौं आन्दोलन र उत्सर्गपश्चात् प्राप्त भएको नयाँ शासन व्यस्थामा पनि ती भुइँमान्छेहरू शाषकको स्वागत र मनोरञ्जनका लागि नाच देखाउन अभिशप्त छन्, कविताले बोल्छ । यो कविता कविको राजनीतिक जागरुकता पनि हो । जहाँ कविले राजनीतिक स्खलनप्रति ठाडो प्रतिवाद नगरी एउटा पात्रमार्फत कलात्मक प्रहार गरेका छन् । सम्भवतः शब्दको शक्ति यसरी नै प्रभावकारी भइदिन्छ होला । कवि सुन्दर कुरूपको काव्यिक वैचारिक धरातल पहिचान हो । मतलब उनको कविताको वैचारिक गन्तव्य समता र सामाजिक न्याय नै हो ।
पछिल्लो समय पहिचानवादी कविहरूको स्वर अलि उग्र भएको यथार्थ हो । कविको स्वर उग्र भएपछि कलालाई धकेल्दै नारा अगाडि आउने सम्भावना प्रचुर हुँदोरहेछ । तर्सथ पहिचानवादी कविहरूलाई केही समालोचकहरूले फगत कर्कश आवाजसम्म भन्न भ्याए । कर्कश स्वर उनको कविताको विशेषता होइन । यो पृथ्वीमा मेरो पनि गाउँ छ, त्यहाँ आमा छ, बुवा छ, मेरो अनुहार छ भन्ने शालीन र कलात्मक आग्रह नै समग्रमा पृथ्वीको आविष्कार हो ।
लामो समय गजल र कविता विधामा साधनारत कवि हुन् सुन्दर कुरूप । गजलमा पनि स्थापित नाम हुन् । गजल लेख्ने अभ्यासकै कारण होला, उनले कवितामा पनि थोरैमा धेरै कुरा भनेका छन् । कवितामा अनावश्यक शब्द आएको छैन । सम्भवत यसैकारण होला उनले लामो कविता लेख्न रुचि देखाएनन् ।
प्रत्येक कविको आफूलाई प्रिय लाग्ने केही शब्दहरू, विम्बहरू हुँदोरहेछ । त्यो रोग भनूँ या आदत कवि सुन्दरमा पनि रहेछ । जस्तो कि सर्वाधिकपटक उनले पृथ्वी विम्ब चलाएका छन् । खतरनाक र भयानक उनले बढ्ता प्रयोग गरेका प्रतीकहरू हुन् । लामो कविता पढ्ने आदत भएका पाठकहरूको लागि पृथ्वीको आविष्कारले तृप्ति दिँदैन ।
इलामका एक जना कवि छन् डम्बर पहाडी । उनी एकलाइने कविता (एलाक) लेख्छन् । उनको शैलीमा भन्ने हो भने पृथ्वीको आविष्कार छिप्पीएको निगार हो । तर, गुलियो छ ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७६ ११:२२